HomeNewsएसपी डा. देउती गुरुङ भन्छिन् ‘डग ह्यान्डलरका लागि तालिम दिनु निकै चुनौतीपूर्ण छ ’
डा. देउती गुरुङ ब्रिटिस आर्मी परिवारमा जन्मिइन् । धादिङको दुर्गम गाउँ सत्यदेवीमा जन्मिएकी उनले कक्षा सातसम्म स्थानीय स्कुलमा पढिन् । त्यसभन्दा माथिको कक्षा त्यस स्कुलमा थिएन । रिटायर्ड ब्रिटिस आर्मी बुवाले छोराछोरी पढाउन काठमाडौं ल्याए । सात कक्षा पढेकी देउती काठमाडौं आएपछि बोर्डिङमा चार कक्षामा भर्ना हुनुपर्‍यो । चार कक्षामा भर्ना हुनुको रहस्य उनले हाँस्दै खोलिन्, ‘त्यसवेला चार कक्षादेखि ए, बी, सी, डी पढ्नुपथ्र्यो । त्यही पनि गाउँको स्कुलमा पढेको अंग्रेजी केही आउँदैनथ्यो । चार कक्षामा भर्ना हुन भनसुन गर्नुपरेको थियो ।’
लैनचौरको रातो स्कुलबाट एसएलसी पास गरेपछि देउतीले अस्कल क्याम्पसमा साइन्स पढिन् । त्यसपछि उनले शिक्षा मन्त्रालयबाट छात्रवृत्ति पाएर बेंग्लोरबाट ब्याचलर्स इन भेटेनरी साइन्स पढेर नेपाल फर्किइन् । पढेर फर्किएपछि लोकसेवाको तयारी गरिन् । र, नाम निकाल्न सफल भइन् पनि । कृषि मन्त्रालयमा जागिरे भइन् । त्यसवेला पशुपक्षी मन्त्रालय नछुट्टिएकाले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर काम गर्नुपरेको देउती बताउँछिन् । उनी ०५१ सालमा एक वर्षको मिहिनेतले लोकसेवा पास गरेर सरकारी जागिरे भएकी थिइन् । काम गर्न थालेको करिब ४ महिना मात्रै भएको थियो । त्यसैवेला नेपाल प्रहरीमा जागिर खुल्यो । उनको बुवा ब्रिटिस आर्मी भएकाले सन्तानमा कोही फोर्समा होस् भन्ने चाहना थियो । प्रहरीमा जागिर खुलेको सुनेपछि बुवाले छोरीलाई प्रहरीको जागिरमा जान सल्लाह दिए । तर, उनलाई जागिर छाड्न मन लागेको थिएन । तर, बुवाको रहरले गर्दा कोसिस गर्ने निधो गरिन् ।
देउती बुवाको सल्लाहबमोजिम प्रहरी इन्स्पेक्टरमा भिडिन् । र, छनोट भइन् पनि । बुवाले मन्त्रालयको जागिर छाडेर प्रहरीमा जान सल्लाह दिए । उनले त्यसै गरिन् । उनी पुलिस डग सेन्टर रानीबारी महाराजगन्जमा जागिरे भएर आइन् । ०५१ सालदेखि उनको कमान्डमा पुलिस डग सेन्टर चल्न थाल्यो । त्यसवेला नेपाल प्रहरीसँग दुईवटा मात्र कुकुर थिए । जसले अपराध अनुसन्धानमा सहयोग गर्थे । संरचना पनि सानो थियो । त्यसयता रानीबारी महाराजगन्ज डग सेन्टर डा. देउतीको कमान्डमा चल्न थाल्यो ।
देउती ०६२ मा डिएसपी र ०६७ मा एसपीमा बढुवा भइन् । डग सेन्टर देउतीको कमान्डमा चलेकै २३ वर्ष भयो । भन्छिन्, ‘मैले लामो समय प्रहरी सेवामा बिताएर आज एसपी बन्न सफल भएकी छु । तर, एसएसपीको कोटा छैन । विभागले यसतर्फ ध्यान दिन्छ भन्नेमा आशावादी छु ।’ उनको कार्यकालमा डग सेन्टरले हरेक कुरामा स्वरूप फेरेको छ । अपराध अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने कुकुरको संख्या ७९ पुगेको छ । धनगढीबाहेक हरेक क्षेत्रमा कुकुरको ड्युटी खटाएकी छिन् । उनको कमान्डमा एक सय ४४ जना तालिमप्राप्त कुकुर प्रशिक्षक छन् । यस अवधिमा धेरै आपराधिक अनुसन्धानमा कुकुरले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
लोकसेवा पास गरेर कृषि मन्त्रालयमा जागिरे भएको चार महिना नबित्दै देउतीलाई रिटायर्ड ब्रिटिस आर्मी बुवाले प्रहरीमा भर्ना हुन सुझाए
नेपाल प्रहरीको कुकुरले ‘स्निफ’ नगरी नेपालमा कुनै पनि भिभिआइपी सहभागी हुने महत्वपूर्ण कार्यक्रम सुरु हुँदैन । त्यत्ति विश्वासिलो बन्नका लागि देउतीले २३ वर्षीय कार्यकालमा धेरै चुनौती पार गर्नुपर्‍यो । एयरपोर्टबाट लागुऔषधको ओसारपसार हुने हुनाले अनुसन्धानका लागि प्रयोग हुने कुकुर राख्न उनले धेरै मिहिनेत गरिन् । भर्खरै मात्र अमेरिकाले हत्या अनुसन्धानमा प्रयोग हुने ‘ब्लड हाउन्ड’ प्रजातिको कुकुर र लागुऔषध अनुसन्धानमा प्रयोग हुने बिगल प्रजातिको कुकुर दिएको डा. देउती बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘सबै कुकुरको तालिम र कुकुर प्रशिक्षक (डग ह्यान्डर)का लागि तालिम दिनु निकै चुनौतीपूर्ण छ । अनुसन्धानमा कुकुरको प्रयोग गर्दा एकदमै सचेत हुनुपर्छ ।’
अलिकति गल्तीले गलत मान्छे पर्न सक्ने भएकोले एकदमै सचेत भएर काम गर्नुपर्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘कुनै पनि अनुसन्धानमा कुकुरको प्रयोग गर्दा घटनास्थलमा अन्तिममा छुने व्यक्तिको गन्ध स्निफ गरेर पहिचान गर्ने हो । सबैमा यो ज्ञान नहुँदा घटनास्थल सुरक्षित राख्न नसक्दा गलत मान्छेलाई कुकुरले संकेत गर्न सक्नेमा एकदमै सचेत हुनुपर्ने हुन्छ ।’ नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानमा प्रयोग गर्ने कुकुर र कुकुर गाइडलाई तालिम दिँदा एकदमै सचेत हुनुपर्छ । जुन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछिन् ।
साभार : ईनयाँ पत्रिका डट्कम